မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ နားဆင်ရန်7OnlineRadio...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဘလော့လေးမှာ ပိုစ့်တွေပြန်လည်၍ အသက်သွင်းတော့ပါမယ်...! ကျွန်တော် ဘလော့လေးနဲ့ဝေးနေရတော့ စိတ်ထဲမှာဟာတာတာလေးဖြစ်နေသလို ခံစားရပါတယ်...! ဒီနေ့ကျွန်တော် မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ 7Online Radio Player လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
" ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်နေ ရောက်နေ သင်ဟာ မြန်မာ တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 7OnlineRadio ဟာသင့်အတွက်ပါ "
စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...!
"7Online Radio " ( 559.34 KB )
No Response to "မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ နားဆင်ရန်7OnlineRadio...!"